दोषी चरी र घैटे कि कांग्रेस–एमाले ? ~ FMS News Info
दोषी चरी र घैटे कि कांग्रेस–एमाले ?
समाजमा अपराध कर्ममा लाग्ने पात्र समाजमा जन्मे हुर्केका व्यक्ति हुन् । मानिस कि त धेरै कमाउने सपना देखेर लुटपाट चन्दा असुली, डर, धाक धम्की दिएर फिरौती उठाउने काममा लाग्छ कि त समाजबाट आर्थिक रुपमा अपहेलित भएर यो पेसामा लाग्छ । काम नगर्ने, डर र धम्की दिएर खाने हिम्मत एउटा व्यक्तिले गर्न सक्दैन ।
अपराधिक धन्दा चलाउनको लागि कि त प्रहरीकै साहरा लिएको हुन्छ । कि त ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण लिएको हुन्छ । मुख्यतः अहिलेसम्म गुण्डागर्दी गर्ने समाजमा दादागिरी देखाएर व्यवसाय चलाउनेहरुले राजनीतिक संरक्षण लिएको देखिन्छ ।
ठगठाग गरेको सम्पत्तिको केही हिस्सा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बुझाउने, राजनीतिक दलका नेताहरुले चुनावको बेलामा अपराधिक काममा संलग्नहरुसँग आर्थिक सहयोगदेखि लिएर भौतिक सहयोग पनि लिने गरेका छन् । अपराधिक क्रियाकपालमा संलग्न हुनेहरुलाई प्रहरीले चाहेको बखत सहजै नियन्त्रण र निर्मूल पार्न सक्छ । गुण्डा नाइकेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ । तर चौकीमा पुर्याउन नपाउदै कि प्रधानमन्त्री, कि गृह मन्त्री, कि मन्त्री, कि सभासद कि राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब थेक्न सक्दैनन र बीच बाटो बाटै छोडन बाँध्य हुन्छ ।
चरी मारिदा एमालेको हारगुहार
टोले गुण्डा हुन्जेल कुनै पनि संरक्षणको आवश्यकता ठान्दैनन् । जब गुण्डागर्दीको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्छन, तब गुण्डाहरुले राजनीतिको आड लिन्छन । पार्टीलाई चन्दा दिन्छन, नेतालाई पैसा खुवाउंछन र आफ्नो धन्धालाई झण्डै वैधानिक रुपमा चलाउने वातावरण बनाउंछन । राजनीतिको आड लिएपछि ढुक्क । प्रहरीले पक्राउ गर्यो भनेपनि छोडी हाल्ले ।
दिनेश अधिकारीको उर्फ ‘चरी’को नामले चिनिएका डनले थोरै समयमा अकुत सम्पत्ति कमाए । चन्दा असुली, हप्ता असुली, धम्कीजस्ता अपराधिक कामबाट धन त कमाए, तर सुरक्षित महशुस गरेनन । गुण्डाहरुबाटै असुरक्षित । प्रहरीले पक्राउ गर्ला भन्ने चिन्ता र छटपटी । त्यसपछि चरीले एमाले पार्टीको साहरा लिए । एमालेका हरेक गतिविधिमा संलग्न भए । ओलीले टिका लगाएर भित्र्याएपछि चरीको विषयलाई लिएर पार्टी निकै विवादि पनि भयो । तर पनि एमालेको आवरणमा चरीले आफ्नो अपराधिक क्रियाकलापलाई झन खुल्लखुल्ला ढंगबाट अगाडि बढाए ।
हप्ता असुली, धम्की लगायतका मुद्दाको आधारमा प्रहरीले चरीलाई पक्राउ गरेपनि प्रहरी कार्यालय नपुग्दै छोडने अवस्था प्रहरीले झेल्नु पर्यो । प्रहरीको लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय अरु के हुन सक्छ ? पक्राउ गरेर ल्यायो, छोडनु पर्ने भएपछि प्रहरी पनि वाक्कदिक्क भयो ।
प्रहरीले सुनारको सय चोट भन्दा लोहारको एकै चोट भन्ने उखान अनुसार काम गर्य। एक बर्ष अघि चरीलाई इन्काउन्टरमा मार्यो । चरीको मृत्युको विषयलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली तातिए । एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डले संसदमा हंगमा मच्चकाउन खाजे। तर एमालेभित्र पनि डनको पक्ष लिएको भन्दै आलोचना भएपछि चरीको हत्या त्यतिकै सेलायो । अन्ततः एमालेको झण्डा ओढाएर चरीको दाहसंस्कार गरियो ।
घैटे मारिदा कांग्रेसमा कोकोहोलो
गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने काम अनुसार प्रहरीको इन्काउन्टरमा गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैटे’को मृत्यु भएपछि कांग्रेसका केही नेताहरुले कोकोहोलो मच्चाएका छन् । कांग्रेसको संरक्षणमा अवैध धन्दा चलाउदै पैसा कमाउदै आएका घैटेको मृत्यु भएपछि कांग्रेसका नेताहरुको चिच्याहट निकै देखिएको छ ।
अस्पतालमै गृहमन्त्री वामदेव गौतमको विरुद्ध नारावाजी गरे । गुण्डागर्दी गर्नेलाई प्रहरीले इन्काउन्टरमा मारिदा कांग्रेसका नेताहरु ठुलै नेताको हत्या भएकोजस्तो गरी उफ्रीपाफ्री गरिरहेका छन् । घैटेलाई कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसी र जगदशिनरसिंह केसीले संरक्षण दिदै आएका थिए । अहिले उनीहरु विरोध गरिरहेका छन् ।
घैटेँ मारिएको विरोधमा शिक्षण अस्पताल पुगेका जगदशिनरसिंह केसी
प्रहरीले सात वटा कारणले घैटेलाई खोजी रहेको थियो । आखिर अपराध त अपराध नै हुन्छ । तर कांग्रेसको दबाबको कारणले प्रहरीले पक्राउ गर्दै छोडदै आएको थियो । समाजमा अपराध गर्ने समाजमा आतकं मच्चाउने अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम प्रहरीको हो । गुण्डा मारिदा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बस्नु पर्ने यो कस्तो राजनीति हो । गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्नु र सभ्य समाजको निर्माण गर्नु राजनीतिक दलको पनि दायित्व र कर्तव्य हो । किन राजनीतिक गर्नेहरुले यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । अब घैटेलाई पनि कांग्रेसको झण्डा ओढाएर अन्तिम संस्कार गरिने निश्चित् छ ।
प्रहरीले दिनुपर्ने अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ
समाजमा अराजकता मच्चकाउने, पैसाको लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने । दादागिरी देखाउने । राजनीतिको आडमा ठगी धन्दा गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने गुण्डा नाइके घैटेलाई मारेकोप्रति प्रहरीको सवत्र प्रशंसा छ । प्रशसासगै प्रहरीमाथि पनि गम्भीर खालका प्रश्न राजनीतिक दलहरुले तेर्स्याएका छन् ।
घैटेको हत्या थियो कि इन्काउन्टर ? भन्नेमा प्रहरीले आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । गुण्डा नाइके मारिदा उसलाई संरक्षण दिने राजनीतिक दलले मात्र आपत्ति जनाएका छन् । तर भोली निर्दाेष मानिसलाई पनि प्रहरीले इन्काउन्टरको नाममा मार्यो भने के गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्न हो । चरी मारिदा पनि प्रहरीले आशंका गर्ने ठाउँ दिएको थियो । अहिले घैटे मारिदा पनि आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
यति मात्र होइन घटनाको विषयमा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाको विषयमा स्पष्ट पनि पारि सकेको छ । नागरिक चिन्ता यति हो,‘इन्काउन्टरको नाममा सोझासिधाले ज्यान गुमाउन नपरोस ।’
कांग्रेस–एमालेले जन्माएका घैटे र चरी
गुण्डाहरु जन्मिदैनन जन्माइन्छन् । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि युवाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले गतल काममा लगाउँछन । युवाहरु पैसाको लोभमा लाग्छन् र अन्ततः खुङखार गुण्डाको रुपमा आफू चिनिन्छन ।
गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्ने काम राजनीतिक दलहरुको हो । राजनीतिक दलहरुले नै सरकारको नेतृत्व गर्छन । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि गुण्डागर्दीमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण दिन्छन । गुण्डागर्दीजस्तो सामाजिक अपराध र जघन्य अपराधमा संलग्नलाई बेलैमा कारवाही गर्ने हो भने गु्ण्डा उत्पादन हुने विऊ नै मासिन्छ । तर यहाँ देखासिखी र उपयोग गर र छोड भन्ने उदेश्यको साथ गुण्डा उत्पादन गर्ने कारखानालाई बढवा दिइदै आएको देखिन्छ ।
गुण्डाहरुले पैसा कमाए । तर सुखको मशसुश कहिल्यै गर्न सकेनन । पैसा भएर पनि सधैको त्रास, चिन्ता, कुण्ठाको जीवन बाच्दै आएका छन् । अन्तिममा प्रहरीको इन्काउन्टरमा नाममा मृत्यु । अनि मृत्युपछि पनि समाजमा छिछिर दुरदुर । एमालेले चरीलाई जन्मायो । कांग्रेसले घैटेलाई जन्मायो । अपराधिक कर्ममा लाग्नु चरी र घैटेको पनि दोष छ । त्यो भन्दा पनि बढी दोष अपराधीको संंरक्षण गर्ने कांग्रेस एमालेका नेताहरु बढी दोषी छन् ।nepaliheadlines.com